December 2016 - Page 3 of 30 - Sawirrotv
Bisadihii Magaalada London (VIDEO)
Markii hore dadka ayaa ku faraxsanaa xayaankan cusub ee yareeyay bisadihii duurjoogta, laakiin hadda xaalka waa uu is bedelay, waxaana dawacooyinkii ay bilaabeen inay ugaarsadaan bisadihii qaaliga ahaa ee ay dadku lahaayeen. VIDEO – 1 VIDEO – 2 Booliska Magaalada London ayaa ugu baaqay shacabka inay Bisadhooda iyo eeyahooda ay guryahooda ku xaraystaan marka gabalka …
Amarkii Madaxweyne Obama (VIDEO)
Madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ayaa ku dhawaaqay cunaqabateyn dhaqaale iyo mid diblumaasiyadeed oo uu saaray dalka Ruushka, kaas oo lagu eedeenayo inuu ka danbeeyey weeraradii Internet-ka ahaa ee lagu qaaday Xisbiga Dimuquraadiga ee Maraykanka ka hor doorashadii ka dhacday dalka Maraykanka. VIDEO – 1 VIDEO – 2 Dalka Ruushka ayaa isagana dhankiisa sheegay inuu …
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo Maanta Xariga ka Jaray Isbitaalka Ciidamada ee Martini (SAWIRRO)
December 29, 2016 – Madaxweynaha Soomaaliya Mudane, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta xariga ka jaray isbitaalka Martini ee ciidammada Naafada ee Xoogga Dalka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho. munaasabada xarig jarista ee maanta ka dhacday isbitaalka dayactirka lagu suubiyay ee martiini ayaa waxaa ka qaybgalay, Wasiirka Gaashaandiga, wasiir ku xigeennada Caafimaadka iyo Gaashaandhiga, Taliyaha Ciidanka XDS …
Gaari Xamuul ah oo Darays Ciidan iyo Dawooyin u Siday Ururka Al Shabaab oo Gacanta lagu Dhigay (SAWIRRO)
December 29, 2016 – Ciidamada Xooga dalka Soomaaliya ee ku sugan Gobolka Gedo ayaa waxa ay soo bandhigeen gaari ay gacanta ku dhigeen, kaasi oo sida la sheegay siday dhar ciidan iyo dawooyin loo waday Ururka Al Shabaab. Saraakiisha Ciidamada ayaa shegay in gaarigan laga shakiyay markii uu marayay Degmada Luuq, baaris markii lagu sameeyayna …
Ban Ki-moon oo Baaq u soo Diray Xildhibaanada Cusub ee Dhawaan la Doortay
December 29, 2016 – Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey Ban Ki-moon ayaa waxa uu soo dhaweeyay dhaarinta Xildhibaannada cusub ee Baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya,taasi oo qabsoontay 27-kii Bishan desenber ee sanadkan 2016-ka. Ban Ki-moon ayaa Xildhibaanada cusube ee Soomaaliya ka dalbaday in ay xoogga saaraan dhameystirka dowladda cusub ee Soomaaliya oo ay ugu horeyso, …
DAAWO: Waxyaabaha ay Caanka ku Tahay Magaalada Qadiimiga ah ee Baraawe (VIDEO)
December 29, 2016 – Magaalada Baraawe oo kamid ah magaalooyinka ugu faca weyn ee dalka Soomaaliya ayaa waxa ay leedahay Dhaqamo iyo hido ka duwan tan laga ya qaan dalka Intiisa kale. Baraawe ayaa waxa ay ahaanjirtay magaalo ay yimaadaan ayna ku noolaayeen badmaaxiintii carabta ahaa ee ka ganacsanjiray qaarada Afrika, waxa ayna magaaladaasi ka …
Magaalada Baraawe (VIDEO)
Baraawe ayaa waxa ay ahaanjirtay magaalo ay yimaadaan ayna ku noolaayeen badmaaxiintii carabta ahaa ee ka ganacsanjiray qaarada Afrika, waxa ayna magaaladaasi ka dhisteen guryo aad casri u ahaa waagaas ee aan dalka Soomaaliya laga aqoonini. VIDEO – 1 VIDEO – 2 Hadaba shacaka ku dhaqan magaaladani ayaa waxa ay isticmaalaan farsamooyin iyo dhaqamo ay …
Maamulkma Khaatumo State oo Cambaareeyay Hadalkii ka soo Yeeray Somaliland (Dhagayso)
December 29, 2016 – Maamulka Khaatumo ayaa jawaab adag ka bixiyay hadal ka soo yeeray, Wasiirka Arrimaha Dibada ee Maamulka Soomaaliland Sacad Cali Shire, kaas oo beeniyay in uu heshiis dhexmaray Maamulada Khaatuma iyo Somaliland aysana aqoonsanayn maamul Khaatumo la yiraahdo. Wasiir ku xigeenka Arrimaha Gudaha Maamulka Khaatuma Abshir C/casiis Sheekh oo la hadlay warbaahinta …
Dowladda Soomaaliya oo Qorshaynaysa Inay Mar-labaad Joojiso Qaadka ka Yimaada Dalka Kenya
December 29, 2016 – Madaxda Soomaaliya ayaa qorsheyneysa in isbuucyada soo socda ay mar kale joojiyaan qaadka laga keeno dalka Kenya, kaddib markii dowladda Kenya ay dhaqan gelin weysay heshiiskii la gaaray 13-kii bishii September ee sanadkan 2016-ka. Diblomaasi sare oo ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Dibadda oo diiday in magacyadooda la isticmaalo ayaa sheegay in …